आफ्नै श्रीमानले म एक जना केटी लिएर आउँछु तिमी नरिसाउ है भन्दै आखै आगाडी श्रीमानले अरु केटिसँग सम्बन्ध राखे?हेर्नुहोस |
आफ्नै श्रीमानले म एक जना केटी लिएर आउँछु तिमी नरिसाउ है भन्दै आखै आगाडी श्रीमानले अरु केटिसँग सम्बन्ध राखे?हेर्नुहोस
February 13, 2022 adminLeaveaComment on आफ्नै श्रीमानले म एक जना केटी लिएर आउँछु तिमी नरिसाउ है भन्दै आखै आगाडी श्रीमानले अरु केटिसँग सम्बन्ध राखे?हेर्नुहोस
आफ्नै श्रीमानले म एक जना केटी लिएर आउँछु तिमी नरिसाउ है भनेर भन्दा श्रीमतीले कसरी सहिन् होला ? उनलाई नागरिकता चाहिएको थियो । त्यसैले श्रीमानको त्यस्तो माग पनि स्वीकार गरिन् ।श्रीमानले आफ्नै अगाडी अर्की युवतीलाई बोलाए एउटै कोठामा उनीहरुबीच सम्पर्क भयो । श्रीमतीले नदेखेजस्तो गरेर एउटै कोठामा बसिन् ।
तर जब नागरिकता बनाउने बेला भयो श्रीमानले बोले फेरे । प्रेम विवाह गरेका उनीहरुको छोरी जन्मिएपछि उनको श्रीमान र परिवारको ब्यवहार फेरीएको थियो । छोरी जन्मियो भनेर मलाई हेला गर्न थाले ।बस्नै नसकेपछि हामी आमाछोरीलाई अलग्गै राखिदिनुभयो, उनले भनिन्, विदेश जानु अघि पनि म मोजमस्ती गरेर बस्ने हो । तिमीहरुको वास्ता छैन भन्नुभएको थियो ।
उनको एउटा छोरी छ । छोरीलाई पनि उनले विदेशवाट फोन गरेर म तेरो बुवा होइन अर्कै बुवा खोज भनेर भन्ने गरेको पनि बताइन् । आफु माइत हुँदा पनि श्रीमानले अर्कै युवती लिएर आउने गरेको पनि श्रीमतीको भनाई छ ।विदेशमा हुँदा श्रीमानले आफुलाई छाडा भिडियो पठाउन लगाउँदा नमानेपछि आरोप लगाउने गरेको उनको भनाई छ ।
मलाई हेर्न पर्दैन, मलाई कुनै आश पनि छैन । हिँजो पनि हेरेको थिएन अब झन मलाई के वास्ता गर्ला र तर छोरी ७ वर्षको भइसकिन् छोरीको न्यायको लागि आफुले श्रीमानको खोजी गरेको उनको भनाई छ ।श्रीमान विदेशमा छन् । ५ वर्ष देखि सम्पर्क विहिन भएपछि उनी काखमा छोरी लिएर उनलाई खोज्न हिडेकी हुन् । मिडियामा कुरा सार्वजनिक गरेपछि श्रीमान सम्पर्कमा आउने आशमा उनले आफ्ना कुरा सार्वजनिक गरेकी छन्।
पतिसँग सुतिरहेकि थिइन् एक्कासी कसैले उनको शरीर चलाए जस्तो लाग्यो श्रीमान सम्झेर आँखा खोल्दा महिलाको होस उड्यो!
बुटवलदेखी भर्खर आयो दुखद खबर।उमेर नभई पनि जान थाल्यो ज्यान,पुरा पढ्नुहोस
BREAKING-काठमाडौ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण धेरै बढेपछी सरकारले भर्खर जारी गर्‍यो आकश्मिक सुचना